Bumex vs. Lasix: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
कम्पनी, चेकआउट स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, औषधि जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा समाचार कल्याण खेलहरु औषधि बनाम मित्र औषधि जानकारी स्वास्थ्य समुदाय कम्पनी, समाचार प्रेस घरपालुवा जनावर
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> Bumex vs. Lasix: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
बुमेक्स (बुमेटेनाइड) र लिक्सिक्स (फुरोसेमाइड) शरीरमा अधिक तरल पदार्थ घटाउन प्रयोग गरिएको ब्रान्ड-नाम डायरेटिक्स हो। एडेमा भनेर पनि चिनिन्छ, तरलताको यो अधिक संचय प्राय: जसो मुटुको असफलता, मिर्गौला रोग, र कलेजो रोग जस्ता केही शर्तहरूको परिणामको रूपमा देखा पर्दछ। Bumex र Lasix ले अधिक तरल पदार्थ कम गर्न र लक्षणहरूलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ जस्तै सास फेर्न र हात र खुट्टामा सूजन।
बुमेक्स र लसिक्सले हेन्लेको लूप सहित किडनी ट्यूबल्समा सोडियम र क्लोराइडको पुनर्बर्द्धन रोक्ने काम गर्दछ। लूप मूत्रवर्धकको रूपमा, Bumex र Lasix ब्लक तरल पदार्थ प्रतिधारण र पेशाब को उत्पादन (diuresis) वृद्धि। यी औषधिहरूलाई पानीको गोली पनि भनिन्छ।
यद्यपि बुमेक्स र लिक्सिक्सले समानताहरू साझा गरे, तिनीहरूसँग सामर्थ्य र खुराकमा भिन्नताहरू छन्।
बुमेक्स र लसिक्स बीचको मुख्य भिन्नता के हो?
बुमेक्स बुमेटानाइडको ब्रान्ड नाम हो। Lasix तुलनामा, Bumex एक अधिक शक्तिशाली औषधि हो; बुमेक्स सामान्य गुर्दा प्रकार्य भएको व्यक्तिहरूमा लसिक्स भन्दा times० गुणा बढी सामर्थ्यशाली हुन्छ। यसको मतलब बुमेक्सको प्रत्येक १ मिलीग्रामको लागि, यसले समान प्रभाव प्राप्त गर्न Las० मिलीग्राम लसिक्स लिन सक्दछ। कम Bumex आवश्यक भएकोले, यसको मतलब केहि प्रतिकूल प्रभावहरूको कम जोखिम पनि हुन सक्छ, जस्तै ototoxicity ।
Bumex एक 0.5 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम, वा2मिलीग्राम मौखिक ट्याब्लेटको रूपमा लिन सकिन्छ। यो ०.२5 मिलीग्राम / १ एमएल समाधानको रूपमा पनि ईन्जेक्सन गर्न सकिन्छ। अधिकतम प्रभावहरू मौखिक प्रशासन पछि एक र दुई घण्टा बीचमा र IV इंजेक्शन पछि १ to देखि minutes० मिनेट भित्र देखा पर्दछ। मूत्रवर्धक प्रभाव को लागी रहन सक्छ चार देखि छ घण्टा ।
Bumex सामान्यतया मौखिक ट्याब्लेटको रूपमा ०. mg मिलीग्राम देखि २ मिलीग्राम एकल खुराकमा दिइन्छ। जे होस्, यदि प्रभाव पर्याप्त छैन भने, दोस्रो वा तेस्रो खुराक चार देखि पाँच घण्टा अन्तरालमा दिन सकिन्छ।
लुसिक्स फ्युरोसेमाइडको ब्रान्ड नाम हो। बुमेक्सको तुलनामा, लिक्सिक्स एक पुरानो औषधि हो। यो २० मिलिग्राम, mg० मिलिग्राम, र mg० मिलीग्राम मौखिक ट्याब्लेटको साथै १० मिलीग्राम / १ मिलि इंजेक्शनमा उपलब्ध छ। Lasix मौखिक प्रशासन पछि एक देखि दुई घण्टा भित्र काम सुरु गर्दछ। मूत्रवर्धक प्रभाव को अवधि सामान्यतया को बारे मा हो छ देखि आठ घण्टा ।
Lasix एक मौखिक ट्याब्लेट को रूप मा २० देखि mg० मिलीग्राम एकल खुराकमा दिन सकिन्छ। पर्याप्त खुराक नपुगेसम्म अन्य खुराकहरू छ देखि आठ घण्टा पछि दिन सकिन्छ। अन्तत:, डोजिंग उपचार भइरहेको समग्र स्थितिमा निर्भर गर्दछ।
Bumex र Lasix बीच मुख्य भिन्नता
औषधि वर्ग मूत्रवर्धक मूत्रवर्धक
जेनेरिक नाम के हो? Bumetanide फ्युरोसेमाइड
इंजेक्शनको लागि समाधान मौखिक ट्याब्लेट
मानक खुराक के हो? मौखिक ट्याब्लेट: ०. to देखि २ मिग्रा एकल खुराक। दोस्रो वा तेस्रो खुराक चार देखि पाँच घण्टा अन्तरालमा प्रशासित गर्न सकिन्छ। अधिकतम १० मिलीग्राम प्रति दिन।
IM / IV इंजेक्शन: ०. to देखि १ मिलीग्राम। दोस्रो वा तेस्रो खुराक दुई देखि तीन घण्टा अन्तरालमा प्रशासित गर्न सकिन्छ। अधिकतम १० मिलीग्राम प्रति दिन। मौखिक ट्याब्लेट: २० देखि mg० मिलीग्राम एकल खुराक। दोस्रो खुराक छ देखि आठ घण्टा पछि दिन सकिन्छ। चिकित्सकको विवेकको साथ खुराक व्यक्तिगत आधारमा बढाउन सकिन्छ।
IM / IV इंजेक्शन: २० देखि mg० मिलीग्राम एकल खुराक। दोस्रो खुराक दुई घण्टा पछि दिन सकिन्छ। चिकित्सकको विवेकको साथ खुराक व्यक्तिगत आधारमा बढाउन सकिन्छ।
विशिष्ट उपचार कति लामो हुन्छ? सर्त उपचार गरीरहेको छोटो अवधि वा लामो अवधि का उपचार सर्त उपचार गरीरहेको छोटो अवधि वा लामो अवधि का उपचार
कसले औषधी प्रयोग गर्दछ? वयस्कहरू वयस्क र निश्चित बच्चाहरू वजनमा आधारित
Bumex र Lasix द्वारा उपचार गरिएका सर्तहरू
Bumex र Lasix दुबै तरल पदार्थ (edema) को संचय को उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ को कन्जेस्टिभ हृदय असफलता, कलेजो सिरोसिस, रेनल रोग, र गुर्दा असफलता जस्ता सर्तहरूले गर्दा। अधिक तरल पदार्थ कम गर्दा सास फेर्न र हात, खुट्टा, वा पेटमा सूजन जस्ता लक्षणहरूलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ।
वयस्कहरूमा उच्च रक्तचाप (उच्च रक्तचाप) को उपचार गर्नको लागि लिक्सिक्स पनि एफडीए अनुमोदित छ। यो कि त एक्लो वा अन्य एन्टीहाइपरटेंसिभ औषधिहरूको साथ संयुक्त उच्च रक्तचापको उपचार गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
योनीलाई काम गर्न कति समय लाग्छ?
बुमेक्सले उच्च रक्तचापको उपचार गर्न पनि मद्दत गर्दछ जब अन्य रक्तचाप कम गर्ने एजेन्टहरूसँग प्रयोग गर्दछ। यद्यपि बुमेक्स उच्च रक्तचापको उपचारको लागि अफ-लेबल प्रयोग हुने थियो।
सर्त Bumex Lasix
इडेमा हो हो
उच्च रक्तचाप अफ-लेबल हो
Bumex वा Lasix अधिक प्रभावी छ?
बुमेक्स र लसिक्स दुबै एडेमाको उपचारको लागि प्रभावकारी छन्। यद्यपि बुमेक्स अधिक शक्तिशाली लूप मूत्रवर्धक हो। बुमेक्ससँग लसिक्स भन्दा उच्च जैविक उपलब्धता छ। अर्थ, बुमेक्स शरीरमा लसिक्स भन्दा अधिक कुशलतासाथ अवशोषित गर्दछ।
मा तुलनात्मक अध्ययन , बुमेटेनाइडसँग 80०% जैवउपलब्धता भएको भेटियो जब कि फ्यूरोसेमाइडमा %०% जैवउपलब्धता छ। जैवउपलब्धतामा उनीहरूको भिन्नता हुँदाहुँदै पनि, बुमेक्स र लसिक्स दुबै समानतामा दिइएमा प्रभावकारितामा समान छन्।
बुमेटेनाइड र फ्यूरोसेमाइडको तुलनामा, टोर्सिमाइडसँग आधा जीवन हुन्छ। यद्यपि टोरसेमाइडको बुमेटेनाइड भन्दा लामो आधा जीवन हुन्छ, यो बुमेटेनाइड भन्दा कम शक्तिशाली छ (२० मिग्रि टोरसेमाइड बराबर १ मिलिग्राम बुमेटेनाइड)। एक मा व्यवस्थित समीक्षा , टोर्सिमाइड मुटुको विफलताका कारण अस्पताल भर्नाहरू घटाउनेमा फ्यूरोसेमाइड भन्दा बढी प्रभावकारी देखिएको थियो। टोर्ससाइड र फ्यूरोसेमाइड पनि छ अन्य मतभेदहरु त्यसले कसरी प्रयोग गर्छ भनेर यसले असर गर्न सक्छ।
तपाईंको लागि सबैभन्दा प्रभावकारी लूप मूत्रवर्धक निर्धारण गर्न डाक्टरको परामर्श लिनुहोस्। एक स्वास्थ्य सेवा प्रदायक एक उपयुक्त मूत्रवर्धक भन्दा पहिले तपाईंको सम्पूर्ण अवस्थाको मूल्यांकन गर्न सक्षम हुनेछ।
Bumex vs Lasix को कभरेज र लागत तुलना
बुमेक्स एक ब्रान्ड नाम औषधि हो। यद्यपि अधिकांश मेडिकेयर र बीमा योजनाहरूले बुमेक्स, बुमेटेनाइडको जेनेरिक संस्करण ढाक्नेछ। बुमेक्सको औसत नगदी मूल्य $ 85 को आसपास हो जुन तपाईं यसलाई फार्मेसीबाट खरीद गर्नुहुन्छ। एक बुमेक्स एकलकेयर कूपनको साथ, तपाईं यस औषधिलाई $ २२, वा कममा कम गर्न सक्नुहुन्छ, केही फार्मेसीहरूमा जेनेरिक फारम खरीद गर्दै।
Lasix एक ब्रान्ड नाम औषधि पनि हो जुन जेनेरिक संस्करणको रूपमा उपलब्ध छ। जेनेरिक फार्म, फ्यूरोसेमाइड, प्राय: जसो धेरै जसो मेडिकेयर र बीमा योजनाहरु द्वारा कभर गरिन्छ। एक Lasix कूपनको साथ, तपाईं $4को एक सस्तो लागत तिर्न आशा गर्न सक्नुहुन्छ। एकलकेयर कार्डको साथ यसको लागतको बीमा बिना लसिक्स प्रिस्क्रिप्शनको लागत तुलना गर्न तपाईंको स्थानीय फार्मेसीको साथ जाँच गर्नुहोस्।
मानक खुराक १ मिलीग्राम एक पटक दैनिक (tablets० ट्याब्लेटको मात्रा) २० मिलीग्राम एक पटक दैनिक (tablets० ट्याब्लेटको मात्रा)
विशिष्ट मेडिकेयर कोपे $ ०– $ १ $ 0– $ 4
एकलकेयर लागत $ २२ + + + +
बुमेक्स बनाम लिक्सिक्सको साझा साइड इफेक्टहरू
Bumex र Lasix समान साइड इफेक्ट साझा। बुमेक्स र लिक्सिक्सको सबैभन्दा सामान्य साइड इफेक्टहरू मांसपेशिहरुमा ऐंठन वा कमजोरी, चक्कर आना, खुजली (प्रुरिटस), टाउको दुख्ने, र मतली हो। यी साइड इफेक्ट पनि संकेत हुन सक्छ डिहाइड्रेशन मूत्रमा तरलताको उत्पादन बढेकोले। मांसपेशी ऐंठन पोटेशियमको घाटाको परिणाम स्वरूप हुन सक्छ।
लूप डायरेटिक्सको रूपमा, बुमेक्स र लिक्सिक्सले खतरनाक रूपमा कम रक्तचाप, वा हाइपोटेंसन निम्त्याउन सक्छ। गम्भीर अवस्थाहरूमा, बुमेक्स र लिक्सिक्सले सुस्त श्रवण वा श्रवण क्षतिको कारण पनि हुन सक्छ। टिनिटसको गम्भिरता सामान्यतया दिइने औषधिको खुराकसँग सम्बन्धित हुन्छ, विशेष गरी यदि मूत्रवर्धक सामान्य भन्दा बढी डोजमा दिइन्छ।
मांसपेशी ऐंठन हो १.१% हो *
चक्कर हो १.१% हो *
Hypotression हो ०.8% हो *
टाउको दुखाई हो ०..6% हो *
मतली हो ०..6% हो *
अशक्त सुनुवाई हो ०.%% हो *
खुजली हो ०..4% हो *
स्रोत: डेलीमेड ( Bumex ), डेलीमेड ( Lasix )
बुमेक्स बनाम लिक्सिक्सको ड्रग अन्तर्क्रिया
बुमेक्स र लसिक्स डायरेटिक्स हो जुन अन्य औषधिहरूसँग समान ड्रग अन्तर्क्रिया गर्दछ। किनभने बुमेक्स र लसिक्स सुनुवाइ कमजोरीको कारण देखाईएको छ, ती अन्य औषधिहरूसँग प्रयोग गर्नु हुँदैन जुन समान प्रभावहरू छन्। उदाहरण को लागी, Bumex र Lasix लाई त्याग्नु पर्छ जसले एमिनोग्लाइकोसाइड एन्टिबायोटिक लिइरहेका छन्, जसलाई एक भएको छ सुन्ने कमजोरीको जोखिम । यो जोखिम पनि बढाइन्छ जब बुमेक्स वा लसिक्सलाई सँगै लिएर अर्को लूप मूत्रवर्धक ईथेक्रिनिक एसिडको रूपमा लिइन्छ।
लिथियम Bumex वा Lasix को साथ टाढा हुनु पर्छ। लिथियमको स्तर बढाइन्छ जब लिथियम यी कुनै पनि ड्युरिटिक्ससँग लिन्छ, जसले लिथियम विषाक्तता निम्त्याउन सक्छ।
प्रोबेनेसिड, इंडोमेथासिन, र सुक्रलफेट जस्ता औषधिहरूले बुमेक्स र लसिक्सको मूत्रवर्धक र एन्टिहाइपरप्टेन्ट प्रभावमा हस्तक्षेप गर्न सक्दछ। तसर्थ, Bumex वा Lasix मा हुँदा यी औषधिहरू अनुगमित वा बेवास्ता गर्नुपर्छ।
यद्यपि एन्टिहाइपरटेन्सिभ औषधि कहिलेकाँही बुमेक्स वा लिक्सिक्सको साथ उच्च रक्तचापको उपचारको लागि लिइन्छ, तिनीहरूको खुराक समायोजित गर्न आवश्यक पर्दछ। एंजियोटेंसिन-रूपान्तरण गर्ने एन्जाइम इनहिबिटरहरू वा एंजियोटेंसिन II रिसेप्टर ब्लकरहरूसँग बुमेक्स वा लिक्सिक्सको संयोजनले प्रतिकूल प्रभाव निम्त्याउन सक्छ। जब लूप डायरेटिक्सलाई एन्टिहाइपरटेन्सिभ औषधि सेवन गरी खतरनाक रूपमा कम रक्तचाप (हाइपोटेशन) को जोखिम बढाइन्छ। थप रूपमा, रेनल कार्य पनि असर गर्न सक्दछ जब यी मूत्रवर्धकहरू एन्टिहाइपरटेन्सिभ औषधिको साथ लिइन्छन्।
औषधि ड्रग क्लास Bumex Lasix
स्ट्रेप्टोमाइसिन एमिनोग्लाइकोसाइड एन्टिबायोटिक हो हो
Ethcrynic एसिड लूप मूत्रवर्धक हो हो
लिथियम Antimanic एजेंट हो हो
प्रोबेनेसिड एन्टिगट एजेन्ट हो हो
इंडोमेथेसिन Nonsteroidal विरोधी भड़काऊ औषधि (NSAID) हो हो
Sucralfate संरक्षक हो हो
Bumex र Lasix को चेतावनी
बुमेक्स वा लिक्सिक्स जस्ता लूप डायरेटिक्सको प्रयोगले अत्यधिक पानी र इलेक्ट्रोलाइट घट्न सक्छ। यसले गम्भीर केसहरूमा डिहाइड्रसन निम्त्याउन सक्छ। तसर्थ, Bumex र Lasix मात्र एक स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको निर्देशन अनुसार उचित खुराकमा लिनु पर्छ।
क्याल्शियम र सोडियम लेवललाई असर गर्नका साथै बुमेक्स र लसिक्स पनि हुन सक्छ हाइपोक्लेमिया, वा धेरै कम पोटासियम स्तर s । स्पोरोनोलाक्टोन जस्तो पोटासियम स्पेरि di डायरेटिक पोटासियम स्तर नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्न सकिन्छ।
यकृत सिरोसिसको साथ, कठोर इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन हुन सक्छ हेपाटिक एन्सेफलोपथी वा कोमा।
Bumex र Lasix ओटोटोक्सिसिटीको कारण देखाइएको छ, जसले सुन्ने कमजोरी वा श्रवण हानि निम्त्याउन सक्छ। बुमेक्सको कम डोज बराबर लसिक्स डोजको समान प्रभाव प्राप्त गर्न आवश्यक भएकोले, ओटोोटक्सिटीको जोखिम बुमेक्ससँग कम हुन सक्छ। अझै, लूप डायरेटिक्सको उच्च खुराकले श्रवण कमजोरीको जोखिम बढाउन सक्छ।
कुनै पनि औषधिमा तत्त्वहरूको लागि एलर्जी भएकाहरूलाई Bumex र Lasix प्रयोग गर्नु हुँदैन।
Bumex वा Lasix सँग सम्बन्धित अन्य चेतावनी र सावधानीहरूको लागि स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
बुमेक्स बनाम लिक्सिक्सको बारेमा प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
बुमेक्स भनेको के हो?
Bumex एक ब्रान्ड नाम लूप मूत्रवर्धक हो कि बुमेटेनाइड भनिने जेनेरिक औषधि को रूप मा पनि उपलब्ध छ। यसले किडनीमा सोडियम र क्लोराइडको पुनर्बर्द्धन रोक्नका लागि काम गर्दछ शरीरमा अधिक तरल पदार्थ छुटकारा पाउन। यो सामान्यतया ०. to देखि २ मिलीग्रामको खुराकमा मौखिक ट्याब्लेटको रूपमा प्रशासित गरिन्छ। यद्यपि यो एक इन्जेक्शनको रूपमा पनि चलाउन सकिन्छ।
Lasix के हो?
लुसिक्स फ्युरोसेमाइडको ब्रान्ड नाम हो। बुमेक्स जस्तै, Lasix एक लूप मूत्रवर्धक हो जसले edema को उपचार गर्न मद्दत गर्दछ, वा शरीरमा तरल पदार्थ संचय गर्न। Lasix ले कन्जेस्टिभ मुटुको विफलता, कलेजो रोग, र मिर्गौला रोगको साथ उपचार गर्ने मद्दत गर्दछ। यो सामान्यतया २० देखि mg० मिलीग्राम मौखिक खुराकको रूपमा प्रशासित हुन्छ, यद्यपि यो इंजेक्शनको रूपमा पनि प्रशासित गरिन्छ।
Bumex र Lasix समान छ?
दुबै Bumex र Lasix लूप मूत्रवर्धक हुन् जसले अधिक तरल पदार्थबाट छुटकारा पाउन मूत्र उत्पादन बढाउँछन्। यद्यपि तिनीहरू समान औषधि वर्गमा छन्, तिनीहरू फरक तरिकाले dosed छन्। तिनीहरू सामर्थ्य र शोषणमा पनि फरक छन् ( जैव उपलब्धता )। Bumex लेसिक्स भन्दा छिटो काम सुरू गर्दछ, तर यसको प्रभाव छोटो अवधि को लागी रहन्छ।
Bumex वा Lasix राम्रो छ?
Bumex Lasix भन्दा अधिक शक्तिशाली मूत्रवर्धक हो। यसले लामेक्सको ठूलो डोज लिन्छ बुमेक्सको कम डोजको रूपमा समान प्रभाव प्राप्त गर्न। Bumex को अवशोषण पनि Lasix भन्दा अधिक अनुमान गर्न सकिन्छ। यद्यपि, जब बराबर खुराकमा दिइन्छ, Bumex र Lasix सँग समान समग्र प्रभावकारिता हुन्छ। एक डाक्टर जसले कार्डियोलोजी र कार्डियोभास्कुलर अवस्थामा विशेषज्ञ छन् तपाइँको लागि सबै भन्दा राम्रो मूत्रवर्धक निर्धारण गर्न सक्षम हुनेछ।
के म गर्भवती हुँदा बुमेक्स वा लसिक्स प्रयोग गर्न सक्छु?
त्यहाँ गर्भावस्थामा Bumex वा Lasix को उपयोग को सुरक्षा को बारे मा पर्याप्त अध्ययन छैन। Bumex वा Lasix केवल गर्भावस्थामा प्रयोग गरिनु पर्छ यदि लाभहरू भ्रुणको लागि सम्भावित जोखिमहरू भन्दा बढी छ। यो सामान्यतया स्तनपानको समयमा Bumex वा Lasix लिन सिफारिस गरिएको छैन। यदि तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ भने Bumex वा Lasix लिनु अघि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
के म बुमेक्स वा लसिक्स रक्सीको साथ प्रयोग गर्न सक्छु?
रक्सीको प्रभाव बुमेक्स र लसिक्सको सम्भावित साइड इफेक्टसँग ओभरल्याप हुन सक्छ। बुमेक्स वा लसिक्समा हुँदा रक्सी पिउँदा बढ्दो साइड इफेक्टहरू हुन सक्छ, जस्तै चक्कर आउँछ र मतली। लुप डायरेटिकमा हुँदा सामान्यतया अत्यधिक मात्रामा रक्सी पिउन सिफारिस गरिन्छ।
के Bumex मिर्गौलामा खराब छ?
बुमेक्स मुख्यतया मिर्गौला मार्फत हटाइन्छ। बुमेक्सबाट प्रतिकूल प्रभावको जोखिम बढ्दछ यदि तपाईको मिर्गौलाले राम्रोसँग काम गरिरहेको छैन भने। तसर्थ, बुमेक्स लिदा किडनीको कार्यको अनुगमन गरिनु पर्छ। यदि मृगौला समारोह खराब भयो भने, बुमेक्सलाई बन्द गर्न आवश्यक पर्दछ।
के बुमेक्स पोटेशियम बर्बाद हुँदैछ?
बुमेक्स एक शक्तिशाली मूत्रवर्धक हो जसले अधिक तरल पदार्थको मूत्र उत्पादन बढाउन सक्छ। समान टोकन द्वारा, बुमेक्सको उपयोगले तरल पदार्थ र इलेक्ट्रोलाइट्सको नोक्सान निम्त्याउन सक्छ। नतिजाको रूपमा, बुमेक्सले शरीरबाट पोटेशियमको उत्सर्जन बढाउन सक्छ। यसले डिहाईड्रेसन र कम पोटासियम स्तर निम्त्याउन सक्छ।
लुसिक्स भन्दा बुमेक्स कत्तिको बलियो छ?
Bumex लसिक्स भन्दा times० गुणा बढी सामर्थ्यवान छ। अर्थ, बुमेक्सको १ मिग्रि बराबर 40० मिलीग्राम Furosemide को बराबर छ।
के जन्म नियन्त्रणले तपाईंलाई तौल बढाउँदछ?
के म प्रोबायोटिक्स लिन सक्छु जब एन्टिबायोटिक लिन्छु
xanax लाई किक मा कती समय लाग्छ?
के हुन्छ यदि तपाइँ रक्सी संग nyquil लिनुहुन्छ
जेड प्याक एंटीबायोटिक कस्तो प्रकारको छ
के म अरु कसैबाट निमोनिया लिन सक्छु?